Ny endrika matroky ny mondialy tany Rosia, fanorisorenana ireo vehivavy “sariaka loatra” amin’ireo vahiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2018 5:27 GMT
Vahiny mpanohana mandray selfies miaraka amin'ny vehivavy tanora rosiana eo akaikin'ny Kianja Mena. Pikantsary avy amin'ny CBC News nataon'i Runet Echo
Nandiso ireo fanombatombanana miiba, nahavakivava ireo mpanara-maso be fisalasalana indrindra ny Mondialy tao Rosia, tsy vitan'ny mirehareha amin'ny fandaminana tsara ny hetsika ny media sosialy sy ny lahatsoratra an-gazety fa nanadino ny fifanandrinana jeo-politika ny rivotra niainana feno fifaliana, mampiray ny Rosiana an'arivony tamin'ny fiarahana mifety tamin'ireo vahiny avy amin'ny lafivalon'ny tany.
Manondro fanambarana iray niteraka ady hevitra lehibe nataon'i Tamara Pletneva izay solombavambahoaka ao amin'ny paremananta rosiana indray andro alohan'ny hisokafan'ny mondialy ny sioka. Filohan'ny vaomieran'ny vehivavy, ny ankizy ary ny fianakaviana, nampitandrina tamin'ny teny maloto ireo vehivavy rosiana izay manao firaisana ara-nofo eo amin'ny samy hafa volonkoditra amin'ireo vahiny mpandalo ny sioka.
Mitondra ny anarana hoe Buceta Rosa ny iray amin'ireo pejy Vkontakte izay tena malaza sy be mpahafantatra, ary misy mpanjohy eo eo amin'ny 5000 eo. manondro zava-nitranga iray izay nisian'ny andiana mpankafy brezilianina nitangorona nanodidina ny mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra Rosiana ary nahatonga ilay vehivavy tsy dia niahiahy loatra ny hihira hira kivalavala miaraka amin'izy ireo. Niteraka resabe tao Brezila izany, izay nilazan'ny mpaneho hevitra marobe fa menatra noho ireo mpiray tanindrazana aminy izy ireo ary nanameloka ny vazivazy ho mpanavakava-behivavy sy mpanavakava-bolonkoditra.
Efa nampitandrina ny tompon'ny pejy Buceta Rosa ny fitantanana ny Vkontake, nanery azy ireo hisivana ny fanehoan-kevitra izay matetika mifantoka fotsiny amin'ireo fanompana sy fandrahonana ireo vehivavy amin'ny alalan'ny sary nalaina tamin'ny tambajotra sosialy. Saingy na misy fanehoan-kevitra arahi-maso akaiky aza dia mbola mandeha foana ny Buceta Rosa ary mitombo isa ireo mpisera vaovao, indrindra taorian'ireo lahatsoratra manokana navoakan'ny haino aman-jery sosialy mikasika azy.
Niparitaka ihany koa ny asa an-tserasera tahaka izao. Nisy horonan-tsary nipoitra avy amin'ireo mihevi-tena ho mpitsara izay manenjika sy midaroka ireo tanora rosiana mandehandeha eny an-dalana miaraka amin'ny vahiny any Moskoa. Nanadihady ny iray amin'ireo niharam-boina ny BBC Rosiana, ary nilaza ny iray amin'ireo fa nahita ny sariny niaraka tamina mpanohana breziliana iray navoaka teo amin'ny pejy Vkontakte neo-nazi iray, ka taorian'izay izy dia nanomboka nahazo fandrahonana ho voaolana sy ho faty. Hita ho manana ratram-po ry zareo taorian'ny zava-nitranga ka mieritreritra ny hila fanampiana ara-tsaina mba ahafahany mihoatra ny vokatr'izany.
Nandroandroatra teo amin'ny sehatry ny firenena ilay adihevitra avy eo. Namoaka lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe ” Ny vanim-potoanan'ny makorelina: nahoana no henatra ho an'ny tenany sy ho an'ny firenena ny vehivavy rosianina? ny Moskovski Komsomolets gazety mpamoaka vaovao manaitaitra iray efa tamin'ny vanim-potoana sovietika sy iray amin'ireo gazety malaza indrindra any Rosia.
Niteraka sahotaka an-tserasera, nahatonga fanangonan-tsonia tao amin'ny Change.org manery hanesoran'ilay gazety ny matoandahatsoratra sy hialany tsiny ilay lahatsoratra efa voavakin'olona dimy hetsy tamin'ny fotoana nanoratana azy ity tamin'ny teny anglisy. Nanameloka ny fironana fanavakavahana ny lahy sy ny vavy ataon'ny haino aman-jery amin'ny ankapobeny i Wonderzine, ilay tranonkala feminista:
Naneho hevitra ny sasany nanohitra ny tondromolotra mahazo ny vehivavy. Namoaka matoandahatsoratra tao amin'ny sports.ru izay tranonkala ela indrindra tamin'ireo tranokalam-baovao ara-panatanjahantena ao Rosia, sady izy koa no talen'ny fanoratana ao, i Iouri Doud, mpanao gazety sady mpikatroka, ary mpanolotra fandaharana malaza mitovy anarana aminy. Nolazainy tao ny rikorikony amin'ny fihoaran'ny fankahalana amin'ny fanehoan-kevitra eo amin'ireo sary navoakany tao amin'ny Instagram momba ireo ireo mpanohana baolina roa, dia ilay vehivavy manao akanjo nentin-drazana rosianina sy ilay lehilahy meksikanina manao sombrero mifampitantana.
Nanoratra fanoherana maventy amin'ny lahatsoratry ny Moskovsky Komsomolet ihany koa ny tranonkala Cosmopolitan Russia anakianany ny “mizana tsindrian'ila” atao amin'ny vehivavy any Rosia.
Nefa andao hiverina amin'ny resaka fananahana: efa imbetsaka isika no nanoratra ny ‘mizàna tsindrian'ila’ ato amin'ny fiarahamonintsika. ‘Soavaly tanora matanjaka’ ny lehilahy miova olon-tiana matetika fa ‘makorelina’ kosa raha vehivavy no manao izany. Anokafana fianarana ny lehilahy amin'ny fikaotiana, izay hianaran'izy ireo ny fomba “hampitsanganana ny sipa ao anatin'ny indray mandeha monja”, fa ho an'ny vehivavy kosa fiofanana amin'ny fananahana ianarana minono lalina sy izakàna firaisana ara-nofo any amin'ny lava-pitombenana rehefa ilain'ny vadiny izany (raha tea tsy maintsy ataony izany ka tsy tokony hisalasalàna akory). Mpivaro-tena ny vehivavy voaolana ary tsy afaka manome tsiny afatsy ny tenany ihany. Raha lehilahy no mitovy tranga amin'izany dia tena toy ny olomasim-pirenena: taorian'ny tantara iray mahaontsa, efa ho fito taona lasa izay, nisian'ny fanolanana lehilahy gadra iray gadra tamin'ny tavoahangin-champagne, dia mbola tadidy hatrany ho toy ny heloka bevava mampihoronkoditra sy feno herisetra mihatra amin'ny zanak'olombelona manontolo, ary tena izany tokoa. Fa tsy mendrika ny hanaovana toy izany kosa ny vehivavy voaolana sy voavono. Tsaroantsika ve ilay tantara mampihorin-koditra tamin'ny nahafatesan'i Tania Strakhova (ilay vehivavy nokendaina sy naolan'ny olon-tiany taloha rehefa maty ka namono tena ity farany rehefa avy eo, izay nahazo fangorahana avy amin'ireo Rosiana mpisera aterineto an'arivony) sy ny fihetsiky ny fiarahamonina manoloana ilay zatovovavy